ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်မကျန်းမာသောလေ့ကျင့်ခန်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ပြန်လည်ထူထောင် porn အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏကျန်းမာသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ဓါတ်များထိန်းညှိကြောင်းရှာပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတိုးအလယ်ပိုင်း dopamine ပြင်းအား၏စူးရှသောအကြိမ်ကြိမ်နှင့်နာတာရှည်လေ့ကျင့်ခန်း dopamine အတွက်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ချိန်ညှိ-အားလုံးအကျိုးကို circuitry အတွက်ပို့ဆောင်နေသောကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲလျှော့ချပေးခဲ့ကြောင်း surmise ။ တစ်ဦးက 2015 လေ့လာချက် လေ့ကျင့်ခန်း၏ 8 ရက်သတ္တပတ်သိသိသာသာ meth စွဲပြန်လည်ထူထောင်အတွက် dopamine D2 receptors တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်လေးအထင်ကြီး။ လေ့ကျင့်ခန်းကသူတို့ဦးနှောက် reboot သည်အထိစွဲပြန်လည်ထူထောင် haunts သောနာတာရှည်အနိမ့် dopamine counteracts ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလျော့ကျလာခြင်းနှင့် neuroplasticy တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်, လေ့ကျင့်ခန်းမတရားသောလျော့နည်းစေသည်။ (ဆောင်းပါးများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ခံစားချက်အပေါ်သုတေသနပြုဘို့ဤစာမျက်နှာအောက်ကလင့်ခ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ )
တအသိပေးချက်, ဘေးဖယ်ကျန်းမာရေးန့်အသတ်ထဲကနေ, သင်လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်အရမ်းမြင့်မားတဲ့ရနျလြှငျ, သငျသညျအကြောင်းဖြစ်ပါသည် နိမ့်တွေ့ကြုံခံစား ထိုနောက်မှ။ သို့ဆိုလျှင်လျော့နည်းကျန်းမာသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားကြည့်ပါ။
တစ်ပါတ်3ကြိမ်အပြေးအံ့သြဖွယ်ခံစားရနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောကင်လုပ်ခိုင်းငါဒီအလုံအလောက်မပြောနိုင်ပါ။ 'ငါ့မှာအားကစားခန်းမမှာမပါဝင်ဘူး' ဟုဘယ်သောအခါမျှဆင်ခြေပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ငါအားကစားရုံကိုအရင်သွားဖူးဘူး ငါ့အသက်ကိုမလိုလို။ သင်တတ်နိုင်သလောက် push ups များကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ (၎င်းသည်အရေအတွက်နည်းပါကအရေးမပါ) ထိုအခါ situps, crunches, ပျဉ်, ခြေထောက်ဓာတ်လှေကား (အားလုံးလေး; အားလုံးနောက်ကျော, ခြမ်း, အခြမ်း, ရှေ့) နှင့်ခုံတန်းလျား dips များအတွက်အတူတူလုပ်ပါ။ အိုကေ၊ မင်းလုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ခဲ့သလား။ လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကိုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်တစ်နေ့စီအတွက် ၁ ကြိမ်ထည့်ပါ။
အစပိုင်းမှာတော့ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုသက်သာစေဖို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါကငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါအရမ်းတင်းမာနေတယ်၊ ​​ငါမအလုပ်လုပ်နိုင်၊ ရာသီဥတုကအရမ်းဆိုးတယ်၊ လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ ဒါဟာအားလုံးမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အခုတော့အလားတူအခြေအနေမျိုးမှာငါလုပ်နိုင်သမျှ push-ups လုပ်ပါ။ ငါကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြိုကျ, ကိုယ့်ကိုယ်ကို 4-5 မိနစ်ခန့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း, ငါနောက်တဖန်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပါ။ နောက်ထပ်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မှာ endorphins (သို့) တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကခံစားချက်ကောင်းတွေထက်နိမ့်ကျသွားလေ့ရှိတယ်။ အားစိုက်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့သက်သာစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှု precipitates ။
ok တစ်နာရီအကြာငါ relapse နီးကပ်ခဲ့ငါငါ့လက်၌ငါ့ဒစ်ရှိခဲ့ပြီးနှင့် gonewild ပုံရိပ်တွေအားလုံးရှိရာ reddit အပေါ်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုတော့မည်။ ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပြီး tab အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါကအောင်မြင်မှုကိုမဆိုလိုဘူး ငါ၌ရုန်းကန်စပြုလာသည်နှင့်တစ်နေ့လုံးလုံးရုန်းကန်နေရပြီးတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားသောအခါအဆုံးသတ်သည်။ ငါ pc အတွက်အချိန်ပိုဖြုန်းမယ့်အစားငါဘဝမှာငါပြုခဲ့သမျှအပြင်းထန်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်နေတာထွက်သွားလေ၏။ နောက်မှငါရေအေးသောက်လိုက်တယ်။ fap မလိုပါ၊ အကြောင်းမှာတင်းမာမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းဂိမ်း changer ။ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါသင်တိုက်တွန်းမှုကိုခံစားရတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းတော်တော်များများသည်စျေးကြီးသောပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကိုငါကြိုးစားကြည့်ချင်တဲ့သူအားလုံးအတွက် Burpees (၂၅) မျိုး၊ Pullups (၁၅) ခု၊ Pupups (၁၅) ခု၊
ငါတကယ်အသစ်တစ်ခုကိုနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စက်ဘီးစီးခြင်းသို့ဆည်းပူးနေလေပြီတကား ငါစာကြည့်တိုက်သို့လမ်းလျှောက်သည့်အချိန်အားဖြင့်, ငါ့နဲ့အတူ Endorphins လျှင်မြန်စွာအပြေးကြသည်နှင့်လူမှုရေးဖြစ်အရမ်းစိတ်အားထက်သန်သောကွောငျ့ငါလေ့ကျင့်ခန်းကနေဒါကောင်းသောခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်အဖြစ်တစ်လူမှုရေး setting ကိုရောက်ရှိမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းပါ!
အခြားအပတ်ကငါ edging ခဲ့ဒါ horny ခဲ့, ဒါကြောင့်ငါအသံအတိုးအကျယ် deadlifting အပေါ်သို့စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါအစုံအကြား edging ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ခဲ့ !! (ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ကိုအလေးပေးထားရူးရာဖြစ်ပါတယ်ခဲအလင်းဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ငါပြီးဆုံးခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်, ရမ္မက်စဲသွားတော့ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ဟာ ၉ ​​ရက်ပါ။ ငါရုံ Tae Bo လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်, ငါနေဆဲကြောင်း cardio မြင့်မားခြင်းမှဆင်းလာမယ့်။ ငါမဆို cardio လုပ်ခဲ့တယ်ကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ဆရာရဲ့ကောလိပ်တက်တဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး။ ငါဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲဆိုတာမေ့လိုက်တယ် ယခုတွင်ငါသည်ဤသတိပေးချက်ရပြီပြီးနောက်, ငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ cardio ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါ။ နေ့တိုင်းမဟုတ်သော်လည်းတစ်ပါတ်အကြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ရယူမှုနှင့် socializing, ခရီးသွားလာ။
လေ့ကျင့်ခန်း - သင်သားရဲကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခင်အထိစွမ်းအင်ပိုသုံးပါ။
သန့်ရှင်းသောအစားအစာ - ရောင်ရမ်းသောအစားအစာများ၊
လေ့ကျင့်ခန်း။ သင်လုပ်နိုင်သလောက်နည်းနည်းလုပ်ပါ။ တစ်နေ့ကျတော့ငါအရမ်းအားတက်နေပြီး ၁၁ နာရီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်မရတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးငါလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေပုံမှန်လေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဟာအလေးမသမားနှင့်ဘောလုံးကစားသမားပါ။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရမ်းငြီးငွေ့လာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်လို့၊ ထွက်အလုပ်လုပ်ဘို့ငါ့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်ပြန်လာနေကြသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း - ငါဒီအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်ပထမနေ့ထက်ကျော်လွန်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်။ တိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအေရိုးဗစ်ဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောဖြစ်ပြီးနံနက်အချိန်၌သင့်ကိုတိုက်တွန်းပါကနံနက်ယံ၌လေ့ကျင့်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာသည်သွက်လက်စွာလမ်းလျှောက်နေလျှင်ပင် (အချိန်သို့မဟုတ်အားကစားသမားမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်) ။ ဘယ်တော့မှမနာပါဘူး ဒီမှာအများကြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးအကြောင်းကိုပို့စ်စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သင်မူကား, နှလုံးပုံမမှန်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုရရှိထားသူမဟုတ်လျှင်ငါမူကား, ဒီ bullshit ဆင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ Arnold နဲ့ Randy Couture တို့လိုကြွက်သားကြီးမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မတက်ချင်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတယ်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု - သင်အေရိုးဗစ်ကိုမကြိုက်ပါက 10K လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သို့ ဝင်၍ နံနက်စောစောတွင်သူတို့နှင့်အတူပြေးပါ။ သင့်ကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကိုထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ငါဒါကို ၁၀/၁၀ ပေးတယ်။ မင်းကအဲဒါမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မှတ်စု: ငါ (ဂရက်စီ) ဂျီးဂျစ်ဆုသင်တန်းများတက်သည်။ ငါလွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကစတင်ခဲ့ပြီး Fight Club ကို ကိုးကား၍“ မြည်းသည် cookie မုန့်စိမ်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်လအကြာတွင်၎င်းသည်သစ်သားဖြင့်ထွင်းထားသည်။ ” jiu-jitsu လိုနာကျင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေပါ ၀ င်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကသင့်ကိုလက်ဖြင့်နှိုးဆွပေးလိုတဲ့ဆန္ဒအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏အချိန် Minimize ထွက်အလုပ်လုပ်စတင်ပါ။ ငါညအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးတော့တာပဲ။ ငါပြန်ရသည့်အခါငါရေချိုးခန်းယူနှင့်အိတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာချက်ချင်းအိပ်ငါ့ကိုတတ်၏။
ဦး နှောက်မြူ ပျင်းခြင်း သင့်ရဲ့မြူဆိုင်းသည့်အခါလေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုလုပ်နေစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဒုက္ခကိုမဆိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ မနေ့ကညနေခင်းငါဒေသတွင်းရှိဒေသခံအားကစားရုံများကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဒီကိုယ်ခံပညာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ရေးကျောင်းကိုငါ့အိမ်နားမှာငါတွေ့ပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။ ငါအဲဒီမှာ ၇ မှ ၉း၃၀ ရှိခဲ့ပြီးချွေးတွေလျှံနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးလေ့ကျင့်ခန်းပဲ! ငါဘယ်တော့မှမသက်သာဘူးလို့ပြောရမယ်၊ ဒီနေ့ PMO အတွေးတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတောအုပ်ထဲကထွက်မလာသေးပေမယ့်အခုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကတကယ်တော့ကျွန်တော့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေတယ်ဆိုတာကိုပါ။
ငါယခုအပတ်အစောပိုင်းကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခက်အခဲအချို့ကိုထိမှန်ပေမယ့်ငါတစ်နေ့လျှင် 1-1.5 နာရီအားကစားရုံအချိန်အတွက်လာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ကယ့်ကိုလျင်မြန်စွာပြန်ခုန်ထွက်ထင်ပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းသည်သင့်အားကာယရေးကိုဂရုမစိုက်ရုံသာမကသင့်ဘဝ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပါပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ယောဂနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏စွမ်းအင်ကိုအသုံးချပြီးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်၌သင်ကိုယ်တိုင်တွန်းထုတ်လိုက်သောအခါ testosterone ဟော်မုန်းသည်သင့်သွေးမှစီးဆင်းသွားသည်ကိုခံစားနိုင်သည်။ သင်သည်တွေးတောဆင်ခြင်သောအခါသို့မဟုတ်ခက်ခဲသော Asanas များကိုပြုလုပ်သောအခါသင်၏စိတ်စွမ်းအင်အားလုံးသည်သင်၏အခြားစိတ်ဖိစီးမှုများကိုသင့်စိတ်ထဲသို့လွှတ်ထုတ်ပေးရန်၊ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမာန်မာနနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပါစေနှင့်ရလဒ်များကြောင့်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ငါလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အခါငါပြန်လာတော့မည်။ တကယ်တော့ငါလေ့ကျင့်ပြီးကတည်းကခဏပါပဲ၊ (၃) ပတ်လောက် (ဘောလုံးကစားပွဲတွေမရေတွက်ပါဘူး)၊ ဒါကငါ့ရဲ့မကြာသေးခင်ကကျဆင်းမှုရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါအဓိကအလုပ်၏လေးလံသောဝန်ကိုပြု။ , ထိုင် ups နှင့် crunchers တွေအများကြီးနှင့်နောက်မှ SO အများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကတကယ်ကိုအကူအညီဖြစ်တယ်လို့ငါပြောတယ်၊ ဒါကမှန်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လောက်မေ့သွားတယ်။ ငါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အားကစားခန်းမကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့စုံတွဲနှစ်ပတ်ကသူမနက်ခင်းမှာအရမ်းပင်ပန်းနေပြီးအချိန်မတန်တော့ဘူး။ မနက်ဖြန်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားမယ် ငါအစတွင်ငါအလုပ်လုပ်သောနေ့၌ငါဘယ်လောက်အထိခံစားရသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ကောင်းမွန်သောခံစားချက်မဟုတ်ပါ၊ ပို၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိသည်၊ ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်။ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာစိတ်ကူးကိုတကယ်သဘောကျတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာတကယ်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွက်၊ ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၃၅ ရက် (PMO မပါ) ပတ်ပတ်လည်တွင်လွန်ခဲ့သော ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုအချို့ရှိခဲ့သည်။ ငါမနက်ခင်းမှာစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်။ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာနေ့၊ ဒီစိတ်ဓာတ်ကျတာဟာဘယ်လောက်ကူညီသလဲဆိုတာကျွန်တော်သေချာပေါက်သတိထားမိခဲ့တယ်။ ငါဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးတော်တော်လေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျွန်မတို့နှစ်တွေတုန်းကထက်ဒီနေရာမှာအအေးနဲ့ဆီးနှင်းများပိုနေပေမယ့်ကျွန်မအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။
ငါတကယ်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမျှဝေချင်ခဲ့တယ်။ M-100s လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုစလိုက်တဲ့အခါငါပိုပိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တော့ဘူး၊ Spartacus လေ့ကျင့်ခန်း။ သူတို့ကို youtube မှာကြည့်ရှုပါ - ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကြိုးစားနေယောက်ျားတွေအဘို့, ငါမြင့်မားသောနေ့တိုင်းနံနက်တိုင်းသူတွေကိုမှတ ဦး တည်းလေ့ကျင့်ခန်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ ဒါဟာအလိုတော်ပါဝါကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လမ်းလွဲမည်သည့်ဆန္ဒကိုပယ်ရှား။ တကယ်တော့ငါလမ်းလွဲသွားတဲ့တစ်ခုတည်းသောရက်တွေကငါမလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့နေ့တွေပဲ။
ငါအချိန်တိုးချဲ့ကာလများအတွက်အားကစားရုံများတွင်တည်းခိုတွေ့ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီထက်အပြင်းအထန်ထွက်အလုပ်လုပ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာရုပ်ပုံလွှာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ၁၀ ပုံ ၁ ပုံအနက် ၉ ပုံသည် ဤနည်းဗျူဟာသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအချိန်ကအမြန်နှုန်းဖြင့်အချိန်ကိုသတ်သည်။ ဒုတိယအချက်ကပိုကောင်းတဲ့ပုံသဏ္inာန်ရအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပန်းတိုင်ဆီကို ဦး တည်နေတယ်။ တတိယအချက်ကတော့သင်ပြီးပြီဆိုရင်သင်အရမ်းပင်ပန်းနေပြီးသင်အိပ်ချိန်ပိုများပါလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းပင်ပန်းနေချိန်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။
ဒီတော့ငါရက်ပေါင်း ၆၀ လောက်ရှိပြီ။ ငါ့ရဲ့ယုံကြည်မှု၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ချွေးနွေးထွေးမှုပြandနာနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝကိုအထောက်အကူပြုသည့်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ခင်ဗျားရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု -“ သူအရင်ကငါကြားဖူးတာပေါ့။ ရေအေးလား ဘာဝနာ?” ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဘဝကိုတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာကငါအနည်းဆုံး 60X လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ကောင်းသောအပြုသဘောဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကို Flatline မှထုတ်ပေးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအလုပ်မလုပ်တာကကျွန်တော့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းစေတယ်။ ယုံကြည်မှုလည်းဖြစ်စေတယ်။ အခုတော့သူဟာအမြဲတမ်းအဝလွန်နေပြီ၊ ထိုအခါငါအမြဲအားကစားခန်းမထဲမှာရှာဖွေနေယောက်ျားတွေဒါအရမ်းကိုကိုက်ညီတဲ့ jot တစ် ဦး ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့် Nofap ကကျွန်တော့်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့တယ်
cortisol အဆင့်များသည်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရာတွင်မြင့်တက်နေသော်လည်းခြုံငုံ။ နိမ့်သည်။ Cortisol သည်စိတ်ဖိစီးမှုကာလအတွင်းအမြဲတမ်းမြင့်တက်လေ့ရှိပြီးပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းသည်အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအကြောင်းကြောင့်, ခန္ဓာကိုယ်ပိုကောင်း cortisol မှအဆင်ပြေအောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုအခါသမယအတွင်းက၎င်း၏လျော့နည်းထုတ်ပေး။ လူတစ်ယောက် (သို့) မောက်စ်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားတယ်။ ငါ့မိသားစုနှစ်ဖက်စလုံးမှာစိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့စွဲလမ်းမှုတွေရှိနေတယ်။ ကျွန်ုပ်ကောလိပ်ကျောင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်း M / O မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုအလွန်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိ၊ မရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ငါသည်လည်း orgasm hangover လက္ခဏာမပြဖူးပါ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကအားကစားနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်။
ကိုယ့်တစ်ဦး 10-ရက်သတ္တပတ်ဘွဲယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးသားဖို့, ငါ့ခံစားချက်ယနေ့နံနက်လွန်းကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာအိပ်ရာထဲကရဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါကတော်တော်လေးကောင်းသောသွားလေ၏ယနေ့အဘို့အကြှနျုပျ၏ယလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြု၏။ ရေချိုးခန်းပြီးနောက်ပြီးသားနေ့လည်စာအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်သော်လည်းငါ့ခံစားချက်ငါပြီးဆုံးသောအခါ, 180 ဒီဂရီလှည့်ခဲ့သည်။ သက်တမ်းတိုးသန်စွမ်းအတူမွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ညနေပိုင်းစီမံခန့်ခွဲတိုင်အောင်, အင်တာနက် access ကိုအတူကွန်ပျူတာကိုဖွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အောက်ခြေလိုင်း: ငါ့မျက်မှောက်၌, သင်အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအကြောင်းကိုနှင့်သင့်ကိုယ်ကာယခွန်အားအပေါ်ဂရုမစိုက်အရေးကြီးသည်။ ကြှနျတေျာ့ကောင်းသောမိတ်ဆွေဟောင်း, Matt Furey ကိုးကားရန်: ကနျြးမာရေးအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံခဲ့လျှင် "ထို့နောက်သင့်မြည်းကိုပယ်ဖွင့်မရနှင့်နေ့တိုင်းနည်းနည်းလေ့ကျင့်။ သင်တို့အဘို့အချိန်ရှိသည်အားလုံးအချို့အလင်းဆန့်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်တစ်တွေအများကြီးနောက်ထပ် Boob ပြွန်များ၏ရှေ့မှောက်၌ plopping နှင့်သင်မည်သည့်စွမ်းအင်ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာကြောင့်အံ့သြခြင်းထက်တတ်၏။ "ငါ 100% သဘောတူသည်။
လမ်းလျှောက်ဘို့အပြင်ဘက် Going ကူညီပေးသည်။ ရုံတချို့လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရ။
မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းမဆိုထက်မကသာလွန်သည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာအေရိုးဗစ်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအမြဲတမ်းဇီဝြဖစ်စဉ်မြင့်မားတဲ့ဂျပိန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ယောက်ျားများအတွက်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခြင်း၏အဓိကအချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေသည်ဟုခံစားရရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဤသည်စွဲလမ်း၏လမ်းအတွက်အလွဲသုံးစားမှုလျော့နည်းသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကျန်းမာသောဆက်နွယ်မှုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သောယောက်ျားများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ အလိုလိုသိသည်အတိုင်း, လုပ်နေတာနှင့်ခြားနားချက်ကိုခံစားပြီးနောက်, ကိုယ့်ကိုမှန်ကန်ခံစားရသည်။ testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ယေဘုယျသက်တောင့်သက်သာနဲ့သုခချမ်းသာကိုထိခိုက်စေတယ်။ ငါ့အဘို့, အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင်၏ရဲရင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအကြောင်းပါ။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်ပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အားကစားနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေ၊ တုန်ခါမှုတွေနဲ့ခံစားမှုတွေပိုခံစားလာရတယ်။ သင့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသက်သေပြပါ။ လအနည်းငယ်ကြာအောင်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယူပြီးခြားနားချက်ကိုသတိပြုပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း - သွေးဆောင်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပြtoနာကိုကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှုန်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ငါနှလုံးခုန်နှုန်း - ထို့ကြောင့်အရှိန်အဟုန် - နေသမျှကာလပတ်လုံးငါနိမ့်အဆင့်မှာနေသမျှကာလပတ်လုံး, လမ်းလျှောက်နာရီနှင့်နာရီပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့လက်ရှိ reboot စံချိန်ဟာရက် ၃၀ ဖြစ်ပြီး၊ စတုတ္ထအပတ်မှာ၊ ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ဟာခေါင်မိုးပေါ်တက်လာတယ်။ အင်အားနှင့်စွမ်းအင်များစွာ သင်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည် နာကျင်မှုဖြစ်စေသောဆေးများအဖြစ်အလုပ်လုပ်သော endorphins များကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကမင်းကိုနင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်သင်၏စွမ်းအင်ကိုသင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဖြုန်းတီးရန်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်များလွန်းခြင်းကြောင့်သင်ပြန်လည်မပြန်ဖြစ်ရန်တားဆီးထားသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ပိုမိုပုံသဏ္beာန်ရှိလာမယ်ဆိုရင်သင်ဟာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာပြီးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာလိမ့်မယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ရိုးသားစွာဖြစ်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများသည်နေရာတိုင်းတွင်ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၈ တန်းမှစပြီး (ကျွန်ုပ်မစတင်မှီ) ၌ဤကဲ့သို့သောခံစားမှုမျိုးမရှိခဲ့သော်လည်းဤတွင်ရှိနေသောကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းသူအများစုသည်အလွန်လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကာယဗလသမားမဟုတ်၊ အခြားမည်သည့်အရာမျှမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်မွေးဖွားလာသည်မဟုတ်။ မင်းရဲ့ dopamine system ကိုလုပ်ပေးတာကအရမ်းအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ထင်တယ်။
အပြုအမူကုသမှုစဉ်အတွင်းသမ်ဖက်တမင်းအသုံးပြုသူများအတွက် Striatal Dopamine D2 / D3 receptor အပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်တန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းဆေးခြောက်တဏှာ (2011) ကိုလျှော့ချပါ
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုကင်းများ၏အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2008) နည်းချင်နည်း
သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းခံစားကြည့်ပါရန် Programs ဖြစ်ပါသလား
အပြုအမူကုသမှုစဉ်အတွင်းသမ်ဖက်တမင်းအသုံးပြုသူများအတွက် Striatal Dopamine D2 / D3 receptor (2015) ရက်နေ့တွင်လေ့ကျင့်ခန်းသင်တန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
လေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးဝါး (dopamine) ရှုထောင့် (2008) ကကြိုး abolishes
လေ့ကျင့်ခန်းသုတ်ရည် parameters များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်
ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်း Can ချုပ်ယင်းဦးနှောက်စွဲ (2012) အတွက်
စီးပွားပျက်ကပ်များအတွက်ကုသမှုအဖြစ်တှေးတောဆငျခွ Plus အားပြေး
လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင် dopamine ဆားကစ်၏ Neuroplasticity: ဗဟိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်များအတွက်သက်ရောက်မှု (2008)
လေ့လာမှု: လေ့ကျင့်ခန်းဟာဦးနှောက်ရဲ့ dopamine စနစ် (2018) ပြောင်းလဲနေဖြင့်အားရစရာစွဲကူညီပေးသည်
ဘီး-ပြေး psychomotor ာင်းစတင်သော်လည်းမ post ကို-sensitive အေးစက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက်တွေမှာကိုကင်းများကသွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (2014) များအားလျော့ပါးသက်သာစေ